Gaalkacyo oo ay ka dilaaceen Afduubyo u dhaxeeya Beelaha qaarkood [Dhageyso] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Gaalkacyo oo ay ka dilaaceen Afduubyo u dhaxeeya Beelaha qaarkood [Dhageyso]
Gaalkacyo oo ay ka dilaaceen Afduubyo u dhaxeeya Beelaha qaarkood [Dhageyso]
Duqa magaalada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad oo ka hadlay Afduubyada ka socda Gaalkacyo
Afduubkan ayaa daba socda kadib markii dowlada Puntland dhamaadkii bishii November sanadkii hore 2012, ay magaalada Gaalkacyo kasoo qabatay laba nin oo lagu kala magacaabo Cabdirisaaq Xassan Tahliil iyo Maxamuud Nuux Adam. Labadan nin ayey dowlada Puntland ku eedaysay inay xubno ka yihiin Al Shabaab, waxaana isla markiiba loo gudbiyey Garowe halkaasi oo lagu xiray. Maxkamada Militariga ee Puntland ayaa 2dii bishan Maarso ku xukuntay labada nin xukun Dil Toogasho ah.
Tan iyo intii bishii November labada nin loo soo gubiyey magaalada Garowe, waxaa Gaalkacyo ka bilowday afduub ay beesha Sacad oo uu kasoo jeedo mid kamid ah ragga la xiray ay la beegsaneyso dadka rayidka ah oo kasoo jeeda Beesha Madaxweynaha Puntland u dhashay ee Ciise Maxamuud (Majeerteen), kuwaasi oo si gaar ah u bartilmaamsanayeen kooxaha hubeysan ee kasoo duulaya koonfurta Gaalkacyo. Beesha Sacad ayaa hada afduub ku heystay 2 qof oo kasoo jeeda beesha Ciise Maxamuud.
Arrintan ayaa hada noqotay mid faraha ka baxday maalinimadii shalay ayey dhanka maleeshiyo hubeysan ee kasoo jeeda Beesha Madaxweynaha Puntland ku qafaasheen Waqooyiga magaalada Gaalkacyo wiil dhalinyaro ah oo kamid ah bahda Sportiga kana soo jeeda koonfurta Gaalkacyo (Beesha Sacad), kaasi oo kamid ah dhalinyarada u ciyaara kubada cagta koox ka dhisan Waqooyiga Gaalkacyo.
Waxaa saaka iyaguna dhankooda magaalada Gaalkacyo ku afduubay maleeshiyo koonfurta kasoo jeeda wiil isaguna u dhashay beesha Ciise Maxamuud ee Majeerteen, kaasi oo la sheegay in isagana loo qabsaday afduubkii shalay. Taasi oo ka dhigaysa tirada la kala afduubtay 4 qof.
Maleeshiyaadka Koonfurta Gaalkacyo ku sugan ayaa horey magaalada Gaalkacyo uga afduubtay dad badan oo rayid ah kuwaasi oo ay soo daayeen kadib markii ay aqoonsadeen inaysan u dhalan beesha ay raadsanayaan ee Ciise Maxamuud. Arrintan oo walaac weyn ku abuurtay bulshada.
Maamulka Galmudug ayaa horey uga soo horjeestay xarigii loo geystay raga ay maxkamada Puntland dilka ku xukuntay, sidoo kale maamulka Galmudug ayaan ka hadal afduubka ay geysteen beelaha wax kala afduubanaya.
Duqa magaalada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad ayaa maanta Baaq uu soo saaray sheegay in wax fool xun tahay iyo dhaqan aan horey looga aqoon Gaalkacyo in dad la kala afduubto, isagoo sheegay in horey wax loo kala dili jiray balse waligeed arrintan aysan soo marin magaalada Gaalkacyo, wuxuuna baaq u diray beelaha wax kala afduubanaya inay falka joojiyaan oo lasoo daayo dhamaan dadka la kala afduubtay, Duqa magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxdii shalay afduubka waqooyiga Gaalkacyo ka geystay, isagoo wax fool xun ku tilmaamay afduubka maantana dhacay.
Dhageyso Hadalkii Duqa Magaalada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad
Duqa magaalada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad ayaa dhaliil usoo jeediyey Odayaasha Dhaqanka oo uu sheegay inay ka gaabiyeen in ay arrintan afduubka wax ka qabtaan oo ay bulshada kala dhexgalaan, isagoo sheegay in laga yaabo maamulada ay si isu fiirsanayaan balse looga baahan yahay odayaasha dhanka inay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loo soo afjari lahaa arrimahan foosha xun. Sidoo kale Guddoomiyaha degmada Gaalkacyo ayaa ka hadlay sicir bararka saameynta xoogaleh ku yeeshay suuqyada magaalada isagoo baaq u diray ganacsatada.
Dhinaca kale waxaa isaguna arrintan ka hadlay Nabadoon Cali Diiriye Aloore oo kamid ah odayaasha Koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in falkan uu salka ku hayo afduubkii dhanka Puntland ay u geysatay isla markaana uu sheegay inay kasoo horjeedaan falalkan wuxuuna si adag u sheegay in xalka ugu fudud ee arrintan laga gaari karo ay tahay iyadoo dhamaan dadka la kala heysto la isu soo daayo.
Dhageyso Hadalkii Nabadoon Cali Diiriye Aloore
Nabadoon Cali Diiriye ayaa sheegay wiilka shalay Waqooyiga Gaalkacyo lagu afduubay uusan u dhalan beelihii afduubka ka dhaxeeyey, wuxuuna sheegay in arrintii afduubyadii hore ee magaalada ka dhacay ay wadeen wadahadal iyo xiriiro kala gedisan oo ay la sameeyeen Madaxweynaha Puntland iyo Dowlada Federaalka.
Nabadoon Cali Diiriye Aloore ayaa si guud u cambaareeyey afduubyada isagoo sheegay in bulshada looga baahanyahay in la iska kaashada sidii xal wanaagsan loo gaari lahaa.
Dhaqan Fool xun!
Afduubkan ayaa u badan dadka loo geysanayo dhalinyarada iyo Ardayda magaalada Gaalkacyo wax ka barata, kuwaasi oo si caadi ah isugu kala gooshi jiray koonfurta iyo Waqooyiga Magaalada. Wuxuuna Afduubkan bulshada is dhexgalkeedii ku noqday mid halis geliya, waxayna taasi keentay in iskuulada qaarkood la fasaxo ardayda iyadoo amnigooda loo cabsi qabo.
Waxaan illaa iyo hada muuqan wax xal ah oo laga gaaray arrintan Dowlada Puntland ayaa iyadu diiday inay siideyso ragay dilka ku xukuntay, sidoo kale maleeshiyaadka koonfurta ayaa sheegay inay heysan doonaan dadka la afduubay illaa lasoo deynayo wiilasha dhankooda laga heysto, waa sida ay hadalka u dhigeenee.
Dhinaca kale warar soo baxaya oo ay shacabka Gaalkacyo si weyn u hadal hayaan ayaa sheegaya in arrintan ay hada ka wadahadlayaan Wafdiga Dowlada Federaalka ee ku sugan Garowe iyo Dowlada Puntland. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Soomaaliya ayaa ah ninkasoo jeeda Koonfurta magaalada Gaalkacyo, Halka Wasiirka Maaliyada ee Dowlada Soomaaliya oo kamid ah wafdiga isagana kasoo jeedo Waqooyiga Gaalkacyo, waxaana la hadal hayaa in arrimaha ay ka wadahadlayaan dhinaca Puntland diirada lagu saaro sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada afduubka ee saameynta ku yeelatay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug.